HRW: 'Wixineen seera ragaa sobaafi haasaa jibbinsaa bilisummaa dubbachuu balaarra buusa' - BBC News Afaan Oromoo
Wixiineen seeraa waa'ee ragaa sobaafi haasaa jibbinsaa ilaalchisuun mana maree bakka bu'oota ummataatti koree dhaabbataatti qajeelche irra deebiin akka ilaalamuuf Humaan Raayitsi Wochi (HRW) hubachiise.
Dhaabbanni mirgoota namoomaaf dhaabbata kun seerichi yoo raggaasifame mirga bilisaan dubbachuu kan daangeessuudha yaaddoo jedhu qabaachuu ibsa har'aa baaseen agarsiiseera.
Walakkeessa bara 2018 irraa kaasee sababii odeessaalee sobaafi haasaa jibbinsaaf gama midiyaalee hawwasumaatiin gadhiifamaniin, walitti bu'insi hedduun umamameera kan jedhu ibsi dhaabbata kanaa, motummaan Itoophiyaas kana hordofuun seera kanan baasuu dubbata.
Akka ibsi Huuman Raayits Waach kun agarsiisutti mormii Sadaaraa darbe Finfinneefi naaannoo Oromiyaatti uumamee gara hokkaraatti jijjiiramuun lubbuun namoota 86 akka darbu taasise mootummaan akka labsii kana atattamaan baasu taasiseera.
"Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'insa irra dedeebbiin umamaa jiraniiin, yeroo tokko tokkoos sababii odeeffannoowwan karaa midiyaalee hawaasummaatiin tamsa'anitiin umamaniif deebii kennuuf dhiibbaa olaanaa jalatti argama,'' jedhu dhaabbatichatti qorataa kan ta'an Laatitiyaa Baadar.
"Haata'u malee, seerri haala gaariin hin qoratamiin mirkanneefamu kun aanga'oonni mootummaa mirga bilisaan dubbachuu danquuf itti fayyadamu danda'u'' jechuun sodaasaanii ibsu.
Akka dhaabbata kanaatti, biyyoonni addunyaa seera haasaa jibbinsa qaban aanga'oonni bu'aa siyaasaa isaaniif jecha haala ta'uu qabuun alatti yoo itti fayyadaman mul'atu.
Mootummaan Itoophiyaas seera kanaan alatti tarkaanffiiwwan haasaa jibbinsaa walitti bu'iinsa, tasgabbii dhabiinsaaniifi wal-qooduu kakaasan ittisan fudhachuuf tarsiimoo hunda hammataa ta'e baafachu qaba jedheera.
Isaan keessaas ergaawwan ministirri mummeetiin yeroo garaa garaatti dabarfamaniifi namoonni bebbekamoon kan biraa waa'ee dhiibbaa haasaa jibbinsaa, akkasumas hojiiwwan beekumsa hawaasaa ol-guddisan hojjatamuu qabu jechuun gorsa.
Ibsichi itti dabalun, haalli ittiin wixineen haasaa jibbinsaa kun itti qophaa'e kan seera idil-addunyaatiin kaa'ameen akka hin taaneefi kunis hiikaadhaaf banaa ta'uu ibsa.
Feesbuukiin oduu sobaa Afaanota Afrikaa keessaa seeca'aa jira
Wixineen seeraa ibsawwaniifi baafatawwan ifa hin taane hammachusaa kaasuun, dhaabbilee idil-addunyaa kanneen mirgoota namoomaaf quuqaman dhimmicharratti yaaddoo qaban kaasuun qeequusaanii hima.
Kanaafis dhabbata Motummoota Gamtoomaniitti oggeessii olaanaan bilisummaa dubbii, tibba Itoophiyaa dowwataniitti kan jedhan yaadachunis, seerichi ulaagaalee idil-addunyaa kan hin gunneefi murteen haasaa jibbinsaatiif kaa'ame kan ifa hin taaneedha jechuun kaa'usaanii himu.
''Mootummaan Itoophiyaa haasaa jibbinsaa ittisuuf kan isa dandeessisan seerawwan hedduu qaba,'' kan jedhan Baadar, ''kanneen walitti bu'iinsa kakaasan komachuun, aanga'oonni mootummaa mariiwwan wal danda'uu jajabeessan taasisuu eegalu qabaatu,'' jedhaniiru.
Manni marii bakka bu'oota ummataas osoo wixinee seeraa kana hin ragaasiisin dura, osoo abba alangaa waliigalaafi mana maree dhimmoota seeraafi haqaa, komishinii mirgoota namoomaa Itooophiyaa, dhaabbilee miti-motummaa akkasumas kanneen oggeessota bilisummaa haasaa waliin ta'uun osoo irratti hojjatanii jechuun ni gorsu.
Dhumarrattis, ''Manni maree bakka bu'oota ummataas wixineen seeraa kun akka meeshaa cunqursaa dabalataa hin taaneef gaheesaa bahachu qabaata,'' jedheera.
Feesbuukiin oduu sobaa Afaanota Afrikaa keessaa seeca'aa jiraachuu ibse